मलाई कति बदनाम गर्न सकेको हो ? – Famous Nepal
02:27: AM Sunday December 17, 2017
Posted on November 17, 2017 at 2:11 pm by फ्यामोस नेपाल
प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ ख बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भएपछि चर्चा गर्माएको छ– दीपक मनाङ्गे अर्थात राजीव गुरुङको । झन्डै २ हजार ५ सय मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा नेस्याङ र नार्फू गाउँपालिका छन् । त्यसो त मनाङ्गे नेकपा एमाले प्रवेशसँगै चर्चामा आएका हुन् । यद्यपि, एमालेले टिकट नदिएपछि उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा होमिए । एमालेका तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार भएकी खाण्डा गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर मनाङ्गेलाई नै समर्थन गरेकी छिन् ।
मनाङ्गेले बालक चुनाव चिन्ह पाएका छन् । ५० वर्षीय मनाङ्गेका बाजे मनाङ गाउँका मुखिया थिए । उनका बुवा बर्मा र कलकत्तामा राम्रो आम्दानी गर्ने व्यापारी थिए, तर दानमा रुचि राख्ने आफ्ना बुबाले सन्तानका लागि केही पनि नछाडेको मनाङ्गे बताउँछन् । बुवाको त्यही दानी विरासतले अहिले आफूलाई राजनीतिमा आउन सहज बनाएको उनको दाबी छ । साप्ताहिकले वार्ता गर्दा उनी चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा माथिल्लो मनाङमा पर्ने भ्राजामा मतदातासँग ब्यस्त थिए । हिमाली जिल्ला मनाङको उक्लिँदो चिसोबीच चुनावी गर्मीमा रमाइरहेका मनाङ्गेसँग साप्ताहिकका जनक तिमिल्सिना र भीषा काफ्लेले गरेको कुराकानी :
राजनीतिमा लाग्नु तपाईंको रहर हो कि बाध्यता ?
मैले समाजसेवा गरेको २८ वर्ष भयो । समाजसेवा हामीले १–२ हजार मान्छेका लागि गर्ने हो, राजनीतिबाट अलि ठूलो क्षेत्र र बढी जनसंख्याको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिमा आएको हुँ ।
समाजसेवा चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो ?
सानो कामबाट सुरु गरेको हुँ । मैले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कसरी ठाउँमा पुर्‍याउने भनेर तीनवटा रिसोर्ट खोले जसमा २ सय ७५ जनालाई काम दिए । त्यसपछि मैले रेस्टुराँ खोलें, बार खोलें, यस्तै गर्दै–गर्दै मैले ९ सयजति केटालाई जागिरमा लगाए । ती केटाहरूहरू र उनीहरूको परिवारलाई काम सिकाएँ । क्लब खोलेर जागिर दिएँ । मेरो समाजसेवा यही हो, आईएनजीओ–एनजीओ खोलेर विदेशबाट पैसा ल्याउने मेरो क्षमता भएन् । मैले आफ्नै लगानीमा केटाहरूलाई जागिर दिँदै, काम दिँदै, काम सिकाउँदै लगेको हुँ ।
अहिले तपाईंको लगानी कुन–कुन क्षेत्रमा छ ?
अहिले मेरो आयात–निर्यातको व्यापार छ । यहाँबाट चीनमा जटिबुटी निर्यात गर्छु, त्यताबाट चिनियाँ स्याउ ल्याउँछु । म चिनियाँ स्याउको ठूलै आयातकर्ता हुँ । मैले रात्रि व्यवसाय छोडेको १० वर्षजति भयो । केटाहरूलाई काम सिकाइदिएँ अनि उनीहरूलाई त्यसको जिम्मा लगाएर मैले छोडिदिएँ ।
नेता हुने सोच कहाँबाट पलायो ?
हाम्रो परिवार पहिलेदेखि नै राजनीतिक परिवार हो । मेरो सोचचाहिँ राजनीति तब गर्ने जब आफूलाई आवश्यक हुन्छ भन्ने थियो । पहिले मेरो दाइ पाल्देङ गुरुङले मनाङबाट राजनीति गरिरहनुभएको थियो । मनाङमा उहाँले राम्रो राजनीति गर्‍या हो । अहिले मैले मनाङमा के देखे भने कांग्रेससँग मनाङ्गेहरू साह्रै रिसाएका छन् । पाल्देङ दाइले पनि राजनीति छाडिदिनुभयो, त्यसै ले म अहिले जबरजस्ती आएको हो ।
मनाङको प्रदेशसभाका लागि एमालेबाट तपाईंको नाम सिफारिस हुँदा निकै ठूलो आलोचना भयो नि ?
होइन, यहाँ (मनाङ) त त्यस्तो कुनै प्रकारको कुरा भएको देखिनँ मैले ।
काठमाडौंमा त आलोचना भयो नि, त्यसलाई कसरी लिनुभयो ?
मैले खासै त्यस्तो नराम्रो सोचेको छैन । आजभन्दा ६ महिनाअघि नै स्वतन्त्र लड्ने भनेर म मनाङ आएको हुँ । त्यतिबेला मेरा प्रतिस्पर्धी नै थिएनन् । मनाङका जनताले नै मलाई तपाईं स्वतन्त्र लड्नुहोस् कुनै पनि पार्टीबाट नआउनुस् भनेर बोलाउनुभएको हो । कारण मनाङमा माओवादी जिरो भैसकेको थियो, कांग्रेससँग मानिसहरू असन्तुष्ट थिए, एमालेको जम्मा ८० वटा मात्र भोट भएको ठाउँ हो यो । त्यतिबेला मलाई पार्टीबाट होइन, स्वतन्त्र लड्नुपर्छ भन्ने मनाङका जनता तथा केटाहरूको सर्त थियो, मैले त्यसैलाई स्वीकार गरेको हो । यसपटक मनाङ आएपछि एमालेले राम्रो काम गरेको देखें, एमालेले आफ्नो संगठन बलियो बनाएको रै’छ । एमालेले राम्रो काम गरेको देखेर केटाहरूले दाइ अब एमालेबाट लडौं, स्वतन्त्रबाट नलडौं भन्ने कुरा गरे । कार्यकर्ताकै दबाबमा म निर्वाचनमा उठेको हुँ । मलाई एमालेले टिकट दिएको पनि होइन । त्यही विचमा कांग्रेसले एउटा गेम खेलिदियो अनि काठमाडौंका पत्रिकाले जे पायो त्यही छापे । भएको पनि छापे, नभएको पनि छापे । कांग्रेस र कम्युनिस्टमा फरक छ, कम्युनिस्टमा जे पायो त्यही अभिव्यक्ति दिन सकिँदैन । कांग्रेसमा पैसा भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्टमा त्यस्तो कुरामा अलि गाह्रो छ । एमालेले मलाई टिकट दिन नसक्ने भयो भनेर उहाँहरूले मसँग भनेकै हो ।
तपाईं राप्रपाको जिल्ला अध्यक्ष, किन त्यही पार्टीबाट नउठेर पहिले एमाले हुनुभयो अनि पछि स्वतन्त्रबाट उठ्नुभयो ?
पहिले समग्र मनाङ राप्रपाको थियो, अहिले एमालेमा गएका सबै राप्रपा नै हुन् । हाम्रो जिल्ला राजा महेन्द्रले बनाइदिएको क्षेत्र हो । सबैले राजालाई भगवान् जस्तो मान्थे । पहिले राजाका लागि सबै मनाङ्गे राप्रपामा गए । अहिले राजावादी भनिएका राप्रपाहरू आफैं टुक्रिएर सकिन लागे । एमालेले राष्ट्रवादको विषय उठाएको छ । आखिर राजा पनि राष्ट्रवादी हुन् र एमाले पनि त्यही हो भनेर मलाई एमाले मन परेको हो । केपी ओलीजीले नाकाबन्दीका वेला जुन राष्ट्रवादी अडान देखाउनुभयो त्यसले ममा एमालेप्रतिको अकर्षण बढाएको हो ।
तपाईं एमालेको कि स्वतन्त्र उम्मेदवार ?
म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ ।
एमालेले तपाईंलाईं समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता लियो नि ?
उम्मेदवारी फिर्ता लिनुको कारण उहाँ मेरी दिदी भएर हो । दिदीभाइ लड्दा हामी दुवै जना हार्ने भयौं । उहाँ सोसल वर्कर पनि हो, बिजनेस म्यान पनि हो । हामी सँगै एमालेमा प्रवेश गरेका हौं । त्यसकारण पनि उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो ।
सुरुमै तपाईंलाई टिकट दिँदा पार्टीमा आलोचना हुन्छ भनेर केपी ओलीकै ट्याक्टिसमा यो सब गरिएको भनिन्छ नि ?
त्यो त आरोप मात्र हो । यो सबै कांग्रेसको गफ हो । केपी ओलीलाई म त्यति राम्रो लाग्या भए, मन पराएको भए टिकट दिन उहाँलाई कसले छेक्न सक्थ्यो ? कांग्रेसले दुईनम्बरी धन्दा गर्ने तस्कर तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई त टिकट दिइरहेको छ भने केपी ओलीले मलाईं दिँदा के घाटा थियो र ? म कुनचाहिँ दुईनम्बरी हो, मैले कहाँ तस्करी गरेको छ र ? उहाँहरू खालि डन–सन भनेर आलोचना मात्र गर्नुहुन्छ ।
तपाईं आफूलाई डन होइन भन्नुहुन्छ, तर सबैले किन तपार्इंलाई डन भन्छन् त ?
कांग्रेसीहरूले ममाथि यो डनको उपाधि झुन्ड्याइदिएका छन् । म डन कि टेकबहादुरजी (कांग्रेस उम्मेदवार) का भतिजा डन ? ऊ काठमाडौंमा बन्दुक बोकेर हिँडिरहेको छ, ऊ गोली हानेर समातिएको पनि छ । डन त उहाँहरू पो हुनुपर्ने होइन भन्या ? म त आफ्नो आत्मसम्मानका लागि लड्छु । यदि आत्मसम्मानका लागि लड्दा डन भइन्छ भने ठीकै छ, म डन नै हो ।
चुनावपछि कुन पार्टीमा जानुहुन्छ ? राप्रपा कि एमाले कि अरूमा ?
अहिले केही भन्न सकिँदैन । जित्ने सम्भावना पनि कमै छ । स्वतन्त्र लड्नु भनेको टफ नै हुन्छ । त्यसमाथि यो कांग्रेसले २० वर्ष शासन चलाएको ठाउँ हो । कांग्रेससँग धेरै पैसा छ, पैसा बाँडिरहेको छ । भोट त उनीहरूकै बढी हुन्छ ।
तपाईंसँग पैसाको कमी छैन नि ?
मसँग कहाँबाट पैसा हुनु ? मैले जिन्दगीमा अहिलेसम्म जति कमाएँ ती मेरा कार्यकर्ता मात्र हुन् ।
चुनाव जित्ने सम्भावना छ ?
सबै जना लागिरहेका छन् । अस्ति उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने दिदीसहितका एमालेका साथीहरू पनि लाग्नुभएको छ । यही गतिमा जाने हो भने मनाङमा यसपालि कांग्रेसको पैसाले नजित्ला कि ?
जित्ने आधार भनिदिनुहोस् न ?
पाल्देङ गुरुङ, टेकबहादुर गुरुङभन्दा म नै खाँटी मनाङ्गे भएकाले जितुँला नि । मेरो उपनाम नै मनाङ्गे भएपछि मैले त्यसै जित्नुपर्ने हो । म यहाँको खास बासिन्दा हुँ । पहिलो कुरा त म यही मनाङको मनाङ्गे हुँ । अरू कहाँका हुन्, जनतालाई थाहा छ ।
कतिपयले चुनाव नजिते मनाङ्गे फेरी गुन्डा नाइकेमै फर्कन्छ भन्छन् नि ?
अब हेर्नुहोस्, मान्छेले कुन कुरालाई कसरी बुझ्छ त्यो उसको कुरा हो । यदि तपाईंको छातीमा कसैले आएर हात हाल्छ भने तपाईंले आफ्नो आत्मसम्मानका लागि लड्न सक्नुपर्छ । यदि त्यसरी लड्दैमा तपाईंलाई कसैले डन भन्छ भने डन नै हुनुहोस् । हामी नेपालको पहिलो श्रेणीका नागरिक हौं, हामी अरूले गरेको अन्याय सहने जात होइनौ, अरूले जे गर्दा पनि चुप लागेर बस्ने । आत्मसम्मानका लागि लड्नु अधिकार हो । अझ मनाङका हामीहरू त लडेरै आ’को हो ।
अब हेर्नुहोस्, मान्छेले कुन कुरालाई कसरी बुझ्छ त्यो उसको कुरा हो । यदि तपाईंको छातीमा कसैले आएर हात हाल्छ भने तपाईंले आफ्नो आत्मसम्मानका लागि लड्न सक्नुपर्छ । यदि त्यसरी लड्दैमा तपाईंलाई कसैले डन भन्छ भने डन नै हुनुहोस् । हामी नेपालको फस्ट क्लास सिटिजन हौं, हामी अरूले गरेको अन्याय सहने जात होइनौ, अरूले जे गर्दा पनि चुप लागेर बस्ने । आत्मसम्मानका लागि लड्नु अधिकार हो । अझ मनाङका हामीहरू त लडेरै आ’को हो ।
तपाईं त मनाङभन्दा बढी काठमाडौमै चर्चित हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौंबाटै चुनाव लडेको भए हुन्थ्यो नि ?
म मनाङ्गे हुँ, मनाङमा नआएर कहाँ काठमाडौंबाट चुनाव लड्छु ? मनाङकै मतदाताहरूले मनाङ आउनुस् भनेपछि आउनै पर्‍यो नि ।
तपाईंको पपुलारिटी त काठमाडौंमै छ, होइन र ?
होइन, त्यहाँको पपुलारिटी त साहू र व्यापारी भएका कारणले मात्र हो । यो त मेरो आफ्नै सम्पत्ति र माया गर्ने मानिसहरू भएको ठाउँ हो ।
प्रदेशमा चुनाव जितेपछि कुनै मन्त्रालयको अफर आयो भने कुन मन्त्रालय रोज्नुहुन्छ ?
मनाङका हिसाबले त मैले पर्यटन मन्त्रालय हेर्ने हो । मनाङ पर्यटकीय क्षेत्र हो, त्यसैले अरू मन्त्रालय लिएर के काम ?
पर्यटनमन्त्री बनेर के गर्नुहुन्छ ?
मनाङमा अहिले सडक बत्ती र पैदलमार्गको निकै खाँचो छ । अहिले मनाङमा गाडी आउने बाटोका कारण धूलो उडेर हिँड्नै नसक्ने अवस्था छ, अर्कातिर यसलाई ट्रेकिङ रुट पनि भन्न नमिल्ने खालको स्थिति छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले व्यवस्थित ट्रेकिङ रुट बनाउने हो, अर्को मानिस हिँड्ने बाटोमा सडक बत्ती राख्ने हो । नार्फुक गाउँपालिकालाई विदेशीहरू आएर एक दुई महिना बस्ने ठाउँ बनाउने हो । यो पर्यटकीय क्षेत्र हो, सरकारले यहाँ आउन कडाई गरेको रहेछ, हामीले यसलाई खुला गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र यहाँका जनताले मिठो खान पाउँछन् । अहिले त यहाँ पर्यटकहरूका लागि खानेकुरा नै पुर्‍याउनपनि निकै दु:ख छ ।
अहिलेका नेताहरूमध्ये कसलाई रोलमोडल मान्नुहुन्छ ?
नेपालमा मैले खासै रोलमोडल नै त देखिनँ । पहिले म गणेशमान सिंहलाई सम्मान गर्थें । उहाँ ठमेलकै भएकाले भेटघाट पनि भैरहन्थ्यो । उहाँ त्याग गर्ने नेता पनि हो । म कांग्रेस पार्टीबाट वाक्क भएको कारण त्यो पनि हो । नेपालमा गणेशमान सिंह नै रोलमोडल नेता हुन् ।
अहिले भैरहेकाहरूमा चाहिँ ?
अहिलेका नेताहरूमा त्यो दम नै छैन, सबै ठगैठग छन्, के भन्ने, के मान्ने ? यिनीहरू ठगैठग भएकाले त हामी राजनीतिमा झरेको व्यापार छोडेर । नत्र हामी व्यापारै गरेर बसिराख्या थ्यौं नि ।
केपी ओलीले त तपाईंको प्रशंसा गर्नुहुन्छ रे नि त ?
हेर्नुहोस्, म कुरा ढाँट्दिनँ, मैले केपी ओलीसँग भेटेको पनि छैन । मनाङमा छलकपटको राजनीति हुँदैन, म सरल राजनीति गर्छु तर अस्ति आठ–नौ महिना सरकार चलाउदा उहाँले प्राविधिक रुपमा काम गरेको देखेपछि म प्रभावित भा’को छु ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड कस्ता लाग्छन् ?
मलाई के लाग्नुपर्‍यो, त्यो त मानिसहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो नि ।
अहिले भैरहेका नेताहरूभन्दा तपार्इंमा के फरक विशेषता छ ?
अहिले भैरहेका नेताहरू लोभी छन्, म लोभी छैन । उहाँको के छ भने छोरालाई गाडी किनिदिनुपर्ने, बंगलामा बस्नुपर्ने, स्वास्नीलाई ठूला–ठूला सुनका गहना लगाइदिनुपर्ने, अब मेरी श्रीमतीलाई पनि त्यो चाहना छैन हामी साधारण हिसाबले बसिरहेका छौं । मेरो स्वभाव के हो भने म सडकमा सुत्न सक्छु, सडकमै रमाउन सक्छु ।
राजनीतिमा सबै सम्भावना हुन्छन् । कुनै समय प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो भने तपाईले सोचेको नेपाल कस्तो हुनेछ ?
यो काल्पनिक कुरा भयो । प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो सोच पनि छैन । म सानो जिल्लालाई केही गरिदिन्छु भनेर आएको हुँ । प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आयो भने पनि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, त्यो मेरो क्षमताले भ्याउँदैन । प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हावा कुरा सोच्न पनि भएन, म सोच्न पनि चाहँदिनँ, बनाए पनि बन्दिनँ ।
प्रधान न्यायाधीश पनि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुनुभयो यो देशमा ?
उहाँ पनि १० जनाको चाकरी गरेर हुनु भएको हो । ममा त्यो स्वभाव छैन्, म चाकरी गर्न सक्दिनँ । नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न भारत, चीन तथा युरोपियन कम्युनिटीलाई नमस्ते गर्दै हिड्नुपर्छ, म त्यो गर्न सक्दिनँ । त्यसैले म गाउँमा आउने हो, गाउँलेहरू सबैले मलाई चिन्छन्, उनीहरूले मलाई माया गर्छन् ।
मन्त्री बन्ने सम्भावना त छ नि, हैन र ? उमेर पनि छँदैछ ।
मन्त्री त म आफ्नै खुबीले बन्ने हो । मैले मन्त्री हुन भारतसँग सोधिरहनु पर्दैन । प्रधानमन्त्री हुँदिन, मन्त्री हुन, म आफ्नो स्तरबाट भ्याउँछु, जनताले जिताएर पठाएपछि ।
तपाई गृहमन्त्री बन्नुभयो भने गृह प्रशासन सुधार्न के गर्नुहुन्थ्यो ?
नेपालमा गृहमन्त्री बनेर के पाइन्छ र चार जनाको सेक्युटिरीबाहेक । नेपालमा सबैभन्दा नराम्रो मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्रालय हो, तर नेपालका सबै नेता गृहमन्त्री नै हुन् खोज्छन् ।
तपाईंकै शब्दमा तपाईंले यति लामो समय व्यवसाय र समाजसेवा गर्नुभयो । व्यापारको नाफा केमा लगानी गर्नुहुन्छ ?
नेपाल भनेको व्यापारिक देश हो, औद्योगिक देश होइन । त्यसकारण उद्योगमा जाने कुरा आएन, नेपालमा कमाएको पैसाले खान पनि पुग्दैन । माओवादीको युद्धकालमा हाम्रो सबै सम्पत्ति डुब्यो । नेपालमा कमाएर कुनै ठाउँमा हाल्न सक्ने स्थिति भनेको भ्रष्ट कर्मचारीको हो, नेताको हो । व्यापारीको हालत त यहाँ पतला छ, हेर्नुस् । म पनि ऋणमा डुबेको मान्छे हुँ, १२ वर्षसम्म ऋण तिर्दातिर्दा हैरान भएको छु । पेटभरि खान पाइयो, छोराछोरीलाई पढाउन पाइयो, त्यत्ति हो ।
अहिलेसम्म कति ऋण छ ?
मेरो ख्यालमा व्यक्तिगत ऋण ७०/८० लाख जति होला । बैंकको ऋण ४५ लाखजति होला । यो एउटा नेपालीका लागि निकै हो । इन्भेस्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ऋण छ म माथि ।
तपाईंसँग कतिवटा गाडी छन् ?
एउटा मात्र गाडी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि पर्नुभयो होइन ?
तपाईंले रमाइलो प्रश्न सोध्नुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६३ सालमा संसदमा गएको र ०६४ सालमा पारित भएको हो, तर मेरो सम्पत्ति भनेको ०५२ सालको हो । मलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउनै मिल्दैन । त्यतिबेला अति भ्रष्ट मानिस प्रहरी प्रमुख थिए । हो, त्यही मान्छेसँग मेरो नराम्रो भएकाले मुद्दा दायर गरियो । मेरो मुद्दा दर्तै गर्न नमिल्ने हो । त्यसमाथि मेरो सम्पत्ति केही छैन । मैले सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने बेला श्रीमतीलाई अंश दिएर हिँडेको १५/१६ वर्ष भैसक्यो, मैले पारपाचुके दिएकी श्रीमतीलाई समेत यिनीहरूले अदालतमा तानेर बदनामचाहिँ धेरै गर्‍या छन्, तर यसको पनि पाप त लागिहाल्छ ।
अख्तियारको आँखा लाग्छ भनेर श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति राखेको पनि भनिन्छ नि ?
अख्तियारको आँखा मेरो जीउ नै हेरेर लगाउने भए लगाए हुन्छ, अरू त केही पनि छैन मसँग । अलिकति पाखुरा ठूलो छ, जीउ ठूलो छ, भात धेरै खायो भनेर मुद्दा लगायो भने कुन्नि ? मसँग भएको सम्पत्ति मेरो शरीर मात्र हो, अरू केही पनि छैन । अख्तियार भनेको हामीलाई मतलब भएको कुरै होइन, अख्तियार लाग्ने भनेको कर्मचारी तथा नेताहरूलाई हो, ममाथि अख्तियार लगाउन मिल्दैन ।
अहिले तपाईंको सबै सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा छ हो ?
उहाँ र मेरो सम्बन्ध–विच्छेद भएको झन्डै १५/१६ वर्ष भैसक्यो । अशंबन्डा गर्दा त्यतिबेला एउटा घर र दुईवटा जग्गा थियो उहाँको नाममा, व्यापारचाहिँ मेरो नाममा गरेर छुट्टिएका हौं हामी । त्यतिबेला व्यापार राम्रो थियो । महिनामा ५/६ लाख कमाइरहेकै थिएँ । माओवादी युद्धका कारण मेरो ब्यापार डुब्यो । पारपाचुके भैसकेकी श्रीमतीको नाममा भएको २–४ लाखमा किनेको जग्गा अहिले ४०/५० लाख पुग्यो होला ।
तपाईं नार फूको घटनामा पनि तानिनुभयो नि ?
पत्रपत्रिकामा जे पायो त्यही छाप्न लगाइदिने, जे पायो त्यही गरिदिने ? म यहाँ मनाङमा आफ्नो सुरमा चुनाव प्रचार गरेर बसिरा’छु, कांग्रेसले १० लाख रुपैयाँ दिएर गाउँमा बाड्न पठाएछ । म स्वतन्त्र लडेको मान्छे, एमालेका केटाहरूले पैसा बाँडिरहेका बेला समातेर पुलिसलाई बुझाइदिएछन् । त्यो मुद्दामा समेत मेरो नाम आयो । कति बदनाम गर्न सकेको हो मलाई
गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समूह र प्रहरीवीच गोली हानाहान, एक घाइते
६ असोज, काठमाडौं । गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समूह र प्रहरीवीच काठमाडौंको पेप्सीकोलामा गोली हानाहान भएको छ । गोली लागेर…
प्रधानन्यायाधीश पराजुली भन्छन्, ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैन’
२०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरी झन्डै २६ वर्ष न्याय सेवामा समर्पित रहेका गोपाल पराजुली अनेक आरोह र…
“चुनाव गराउन कानुनले रोकिदैन”
यज्ञबहादुर थापा मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला संविधानको कार्यान्वयनअन्तर्गत २ नम्बर प्रदेशबाहेकका ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न…
‘राष्ट्रपति प्रभावमा पर्नुभयो’
चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर शृंखलाबद्ध अनसन गर्दै आएका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रपति, न्यायालयलाई समेत चुनौती दिँदै पुनः…
डीभी चिठ्ठा प्रणाली नै रद्द गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा
Posted by Raju Lamsal - November 2, 2017 0
काठमाडौं, कात्तिक १६ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिट्ठा प्रणालीबाट अमेरिकामा आतंकवादी भित्रिएको दाबी गर्दै अब…